Astro Cat kuyinto Chinese ezinezihloko slot umdlalo kusuka Lightning Ibhokisi Imidlalo. Kunezindlela eziningana Chinese ezinezihloko slot imidlalo laphaya, kodwa lena imele eyingqayizivele ngenxa Gameplay. Lightning Box is one company that has been creating games that have an out of the box creativity behind them. Lo mdlalo iyitshe umxhwele ohlwini kwabo imidlalo eliyingqayizivele futhi kumnandi. Le game Ubuye ezinye ihluzo ezinhle ngempela okuyinto izincomo Gameplay kahle. Futhi, kuba Ibhonasi slot Ayikho Kudingeka Idiphozithi.
Umbani Ibhokisi kuyinto umthuthukisi slot umdlalo yasungulwa by zezibalo. Bahlale bezama ukwakha amamodeli elisha nelingcono zezibalo ukwenza slot yabo imidlalo mnandi. Ngakho, ngokuzayo unquma ukudlala slot Lightning Ibhokisi, ulindele okuthile okuhlukile.
I-logo umdlalo uqobo ukhonza njengoba zasendle. Kubonakala phezu itolitji 3, 4 futhi izenzo njengendlela esikhundleni zonke ezinye izimpawu kwasinda uphawu ehlakazekile. Lolu phawu kuyinto ngempela ewusizo futhi kukusiza ukwakha payline ngokuwina kaningi ngaphezu not.
I Reelfacta esondweni iyona Luhambo esemqoka yalolu umdlalo. Lokhu empeleni esondweni phakathi umdlalo kodwa sahlukana phakathi kwaba 4×4 igridi ukusingathwa 16 izimpawu. Manje nge izimpawu, kukhona ithuba anda kokwehla ngokuwina paylines. Kodwa uphawu ngalinye Reelfacta esondweni ingasetshenziswa kanye kuphela. Esondweni futhi unendima ebalulekile ukudlala ngesikhathi khulula osebenzisa ibhonasi round.
Lapha kugridi ligcwele ngaleyo ndlela wilds okwandisa amathuba akho okuwina multifold. Njengoba lena Ibhonasi slot Ayikho idiphozithi edingekile ukubuyiselwa zakho kusukela kulo mdlalo kuzokwenza kude ngaphezu okulindele.
Lokhu yobudala slot entsha Gameplay tweaked uma iqhathaniswa Slots zakudala. Luhlelo lolukhulu lwa 1296 izindlela ukunqoba eyokusiza nakanjani kamuva bavuna izinzuzo ezicebile ezivela kule slot. Ngakho, lena ingenye slot ukuthi kuwufanele spin ikakhulukazi njengoba kuba Ibhonasi slot Ayikho Kudingeka Idiphozithi.
Hambayo Fruit Slots Game at Coinfalls Hambayo Slots